"Sidee buu dilaaga ku noqday dhibbanaha?" - BBC News Somali
"Sidee buu dilaaga ku noqday dhibbanaha?"
29 Oktoobar 2019
Dadkii u joogay dilkii arxandarada ahaa ee ka dhacay Iskuul ku yalla New York, sannadkii 2017-kii ayaa ka hadlay dhacdadaas. Waxaa lagu wareystay barnamij taxane ah oo ka baxay BBC Three.
"Dhab ahaantii, waxay ahayd musiibo. Illaa iyo maanta, weli waxaa isku deyayaa in maskaxdeyda aan u sheego sidii ay wax u dheceen: Siduu dilaaga ku noqday dhibbane? Taas ma waxaa sabab u ah midabka wiilkeyga?"
Hooyada wiilk middada laga geliyay wadnaha ee ardeyga ay isku fasal ahaayeen uu ka dambeeyay, ayaa ka hadashay dilkiisi oo dhacay bishii September ee 2017-kii.
Waxay la hadashay barnaamijka Jaceylka iyo Naceybka Dembiga.
Matthew McCree, oo 15 sano jir ahaa waxaa fasalka dhexdiisa ku dilay Abel Cedeno. Dilaaga wuxuu sheegay in tallaabadaas ay ku dhalisay ka dib sanado lagu hayay handadaad iyo xoog u sheegasho.
Ardey kale Ariane LaBoy ayaa sixun u dhaawacday intii uu dagaalka socday.
"Waxaa jiro xilliyo aan dareemo in maskaxdeyda ay tagtay," ayey tiri Louna Dennis oo dhashay Mathew. "Waxaa noqonaaya sida qof rabo inuu qeyliyo."
Cedeno, oo hadda 20 sano jir ah, wuxuu iskuulkiisa Bronx u sheegay xadgudubka iyo naceybka uu la kulmay, balse markii waxba loo qaban waayay ayuu middi la yimid iskuulka si "uu isu difaaco".
"Waxaan u dacwooday xubno ka mid ah qeybaha iskuulka, balse ugu dambeyn waan joojiyay sababtoo ah waxba kama aysan qabanin," ayuu yiri. "Ma aysan i caawin".
"Mararka qaar oo aan u sheegay, waxay crruurta ku dhahaan 'joojiya', taas way iiga sii dartaa."
Cedeno wuxuu ku andacooday in isu hiilinta iskuulka ay ahayd mid xun, uuna si joogto ah ula kulmyay "naceyb la xiriira jinsiyaddiisa".
"hanjabaadaha waxay ahaayeen kuwo argagax leh," ayuu yiri. "Waxay dhahayeen 'bannaanka ayaan kugu sugayaa. Waad i tuugi doontaa'."
Wuxuu la hadlay BBC intii uu damaanadda bannaanka ku joogay. Bishii July ee sannadkan 2019, waxaa lagu helay inuu galay dhammaan dembiyada - dil, weerar, iyo dembiile haystay hub sharcidarro ah.
"Waxay igu dhufan jireen feraha iyo caloosha. Waxay la mid ahayd xabsi xaqiiqdii. Waxay ahayd cabsi. Waxaa jirtay xilliyo an ku fakaray inaan is dilo."
Xigashada Sawirka, BBC THREE/TOP HAT PRODUCTION
Balse, Matthew hooyadii waxay si adag u beenisay in wiilkeeda uu ku lug lahaa handadaadda. "Waxaan doonayaa in aan caddeeyo in wiilkeyga Matthew McCree ma ahayn qof dadka handada," ayey tiri, mar ay shir jaraa'id qabatay ka dib dilka.
"Wiilkeyga waxa jeclaa dad badan. Mathew wuxuu feer dhulka la dhigi lahaa kuwa dadka handada ka hor intuusan qof kale u cagajugleyn."
"Hooyada waxay wayday jaceylkii nolosheeda," ayuu yiri qareenkeeda Sandy Rubenstein, kaas oo difaacaya kiiska Mathew hooyadii ee ah dacwadda $25m oo dollar ee ka dhanka ah mamulka oo ay ku eedeyneyso in ay ku guuldareysteen difaacidda wiilkeeda.
"Weligeed si buuxda ugama soo kabsan doonto," ayu hadalka ku sii daray.
Dilka Aasiya Xirsi: dariska 'waxay raadiyeen abtigeed'
Booliska Britain oo awood dheeraad ah la siiyey
Da’yar ‘lacag lagu siiyay inay dhalinyaro kale tooriyeeyaan’
Qareenka u doodaya Cedeno, wuxuu dhankiisa sheegay in sida loola dhaqmay wiilka, gaar ahaan markii saldhig boolis laga soo bixiyay isagoo gacmaha ka xiran, ay ahayd arrin naceyb.
"Waxaan daawanayaa warka ah sida loo hareereeyay. Dabcan isaga ayaan ka xaqiijiyay," ayuu yiri qareenka difaacaya arrimaha dadka isku jinsiga ah ee isu taga, Christopher Lynn.
Balse ugu dambeyn, Garsooraha maxkamadda ma uusan diidin in Cedeno uu la kulmay naceyb, balse wuxuu go'aansaday in uu 14 sano oo xabsi ah ku xukumo bishii September ee sannadkan.
"Waan aaminsanahay in dareen xun uu kugu yeeshay ficilka soo noqdnoqday ee ah in lagu cabsi geliyay, taas oo liiday muuqaalka noloshaada iyo maskax ahaanba," ayuu yiri Garsoore Michael Gross, markii uu xukunka ridayay, sida ay qortay New York Post.
Wuxuu intaa ku daray: "Taariikhdaada cudur daar uma noqoneyso ficilka aad sameysay."
"Waan ka xumahay xanuunka iyo dhibaatada aan u geystay qoyska," ayuu yiri cedeno oo maxkamadda ka hor hadlayay markii la xukumayay.
"Aad baan uga xumaaday wax kasta oo dhacay, dhibaatada aan geystay ee ah inaan dhaawacay labada qoys."
Ugu dambeyn, Matthew hooyadii waxay dooneysaa in si wanaagsan ay u xasuusato.
"Markasta wuu dhoollacaddeeyaa," ayey tiri. "Meel kasta ee uu tago wax wanaagsan ayuu kala kulmayaa. Weligiina wuu dhoollacadeynayaa.
"Waxa ugu weyn ee aan ilawi la'ayahy waa in aan meeshii uu ku dhintay aan ka maqnaa. Anigoo aan l joogin ayuu dhintay. Ma arkin. Fursad uma helin inaan u sheego jaceylkeyga. Wuxuu ahaa canug aad u farxad badnaa."
Da’yar reer Liverpool ah oo ‘lacag lagu siiyay inay dhalinyaro kale tooriyeeyaan’
18 Juunyo 2019
Shiinaha: Nin mindi ku dilay sagaal ardey
18-jir Soomaali ah oo lagu dilay London
27 Juunyo 2019